‘विद्यार्थीलाई दैनिक ११ रुपैयाँको खाजाले शिक्षा समाजवादी हुन्छ ?’
‘विद्यार्थीलाई दैनिक ११ रुपैयाँको खाजाले शिक्षा समाजवादी हुन्छ ?’ दुई वर्षमा १२ लाख विद्यार्थीले सार्वजनिक विद्यालय छाडे
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अबको १० वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन देखिने दाबी गरेका छन् । २०७६–२०८५ लाई सामुदायिक शिक्षा सबलीकरणको दशक घोषणा गरिएकोले यसबीच शिक्षा क्षेत्रले फड्को मार्ने मन्त्री पोखरेलको तर्क छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण र समाजवादी शिक्षा : अवस्था, चुनाैती र अबकाे बाटाे’ कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रका लागि अबको दशक महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक हुने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा समाजवादी शिक्षाको अवस्था र चुनौतीका विषयमा छलफल गरिएको थियो । पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले सुलभ, वैज्ञानिक र समाजवादी शिक्षाको विषयमा धेरै वर्षदेखि बहस भइरहे पनि उपलब्धि शून्य देखिएको बताए ।
समाजवादी शिक्षाको विषयमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि अझै सार्वजनिक नहुनु दुःखद भएको उनले बताए ।
सामुदायिक शिक्षा सुधार र योजनाबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन गत माघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्दा शिक्षा सुधारका योजना अलपत्र परेको तुलाधरको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुणराज घिमिरेले नेपालले आफ्नै शिक्षा नीति नबनाई अरुको अनुसरण गरेको बताए । अहिले बल्ल दुई तिहाइको सरकार बनेको भन्दै यो सरकारले शिक्षा सुधार गर्न सकेन भने अरुले गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले संविधानमा राखिएको समाजवाद शब्द जनतालाई खुसी बनाउन मात्रै राखिएको जस्तो लाग्न थालेको बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय नांगिएको बताउँदै उनले पहिला विश्वविद्यालयले लाज ढाक्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले नेपालको शिक्षा पहिला पनि धमिलो भएको र अहिले पनि धमिलो नै भएको बताए । २ वर्षमा १२ लाख विद्यार्थीले सार्वजनिक विद्यालय छाडेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै डा. वाग्लले प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई दैनिक ११ रुपैयाँको खाजाले समाजवादी शिक्षा नहुने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले नेपालमा समाजवादी शिक्षाको अवधारण, आधार र भविष्यको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार २६, २०७६, ०४:११:००